Shabaab oo toogtay Ajaanib ka tirsaneyd | Baydhabo Online
Shabaab oo toogtay Ajaanib ka tirsaneyd
Ururka Al Shabaab ayaa shalay gelinkii dambe fagaare ku yaal Degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe, waxa ay ku toogteen labo ruux oo Ajaanib ah, kuwaasi oo ka tirsanaa Shabaabka.
Labadan ruux ee Ajaanibta ah ee Shabaab ka tirsanaa ee shalay galab la toogtay ayaa muddo waxa ay la shaqeynayeen Shabaabka, waxaana Shabaab dhexdooda looga yaqaanaa dadka Ajaanibta ah (Walaalaha Muhaajiriinta).
Kooxda Shabaab ayaa labadan ruux oo u dhashay dalka Kenya waxa ay ku eedeeyen inay ahaayeen Jaajuusiin la shaqeeya Dowladda Kenya iyo Sirdoonka Yuhuuda.
Fagaare ku yaal Degmada Jilib ee Gobolka Jubbada Dhexe, ayaa la soo taagay labadan ruux, halkaasi oo lagu toogtay, kadib Qaadiga Maxkamada oo ku dhawaaqay xukunka dilka ah ee raggaan lagu fuliyay.
Shabaab ayaa magacyada ragaan ku sheegay Cabdullaahu Faraj oo 22 sano jir ah kana yimid Magaalada Xeebta leh ee Mombaasa, wuxuu muddo ka dhex shaqeynaayay Shabaabka, ninkaan Shabaabka waxa ay ku eedeeyeen inuu ku lug lahaa Shirqoolkii lagu dilay Sheekh Caabudo Roogu iyo Sheekh Abuubakar Makabuuri.
Ninka kale ee Shabaabka ay dileen ayaa lagu magacaabaa Jared Mokae Omambia oo 31 sano jir ah wuxuu ka soo jeedaa Degmada Eldoret ee wadanka Kenya, ninkaan ayaa isagana lagu eedeeyay inuu la shaqeynaayay Sirdoonka Kenya.
Waa markii labaad ee Shabaab Degmada Jilib ay ku dilaan dad ay ku eedeynayaan jaajuusiin oo u dhashay dalka Kenya.
48-saac ee la soo dhaafay Shabaabka waxa ay dileen ilaa 7 ruux oo ay ku eedeeyeen inay yihiin jaajuusiin la shaqeeya Dowladaha reer Galbeedka.